Ụbọchị My Pet » Animal-enyi na enyi ntụrụndụ maka di na nwunye
site Lesley Sheridan
Animal-enyi na enyi ntụrụndụ maka di na nwunye
emelitere ikpeazụ: Oct. 22 2020 | 3 min agụ
Kechioma ị - ị na hụrụ onye ịtụnanya na-amasị gị na-ịhụnanya nke na fim, nwere oké ihe ọchị, na adores anụmanụ. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nke ụbọchị n'abalị echiche ma enyoba bụla ihunanya outing, gịnị mere iba na ụfọdụ philanthropy ka di na nwunye, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ incorporate ntụrụndụ ị ama ụtọ? Ebe a bụ ụfọdụ echiche na ụzọ i nwere ike aka, niile na enyem-aka nke onye gị na:
1.) Photography: Gbafee echebe ma anapụtakwa abụkarị mkpa enyemaka akada quality foto nke ha ugbu a anụmanụ dị maka nkuchi. Ị ma ọ bụ onye gị na a nna ukwu nke Instagram, ma ọ bụ na-eme ị hụrụ n'anya kọwaa ins na outs nke aperture? Nke a nwere ike ịbụ oké kwesịrị ekwesị n'ihi na ị, na ọ nwere ike mfe ime ka a dị iche na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ anụmanụ a na-nakweere. Kpọtụrụ ndo ahụ ma ọ bụrụ na ị na ike na-enye gị ọrụ, ma na-eso ndị na-adọrọ mmasị ihu na ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị na-achọpụta na ha n'ebe obibi.
2.) Nhicha: Ọrịa nke tụkọtara? Ọ bụ nnọọ mfe imubanye ọtụtụ ihe dị ka a di na nwunye, n'ihi ya ohere ọcha ụlọ na-enye dị mkpa ihe na obodo echebe ma anapụtakwa. akwa nhicha, blanket, akwụkwọ akụkọ, efere, placemats, na ndị ọzọ nwere ike niile bara uru ka a dị iche iche. Nye ha a oku na-aga, na-ahụ ihe ha mkpa ha. Ị ga-enyere ha na onunu mgbe eme n'ụlọ gị gị na ndị ọzọ haziri ahazi.
3.) Nri: Ịcha si anụ na / ma ọ bụ anụmanụ na ngwaahịa nwere ike liven gị nri ọnụ. Jay-Z na Beyonce mere ya, Ya mere, gịnị na ị? Vegan na anaghị eri anụ na-ewe ke ọkacha mmasị gị efere nwere ike ime ka Pizza n'abalị anya ọzọ na-akpali, na nke a si ebi ndụ na-enye ụzọ ọhụrụ culinary flavors na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụmahụ. Eme ya n'ihi na ụmụ anụmanụ, n'ihi na ike gị, ma ọ bụ nanị na-amuma usoro ihe mepụtara n'ime gị dinners. Nke ọ bụla, ọ bụ bara uru - na tọrọ ụtọ!
4.) Njem: Ndi abụọ ị hụrụ n'anya na-eti na ụzọ? Na-ejegharị ejegharị na gị chọrọ ndepụta, ma ị dịghị iyi mee ka ọ eme? Ọtụtụ echebe ma anapụtakwa mkpa transports n'etiti ha ebe ndị ọzọ anapụtakwa ma ọ bụ obibi nkuchi. Ọ bụrụ na ị na-aga nke obodo na agbanyeghị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ akụkụ ọzọ nke ihe ala, na-enye ibufe anụmanụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị nnọọ otu akụkụ nke ụzọ.
5.) Arts na Crafts: Ọ bụrụ na ị ma eme n'anya N'onwe Gị oru ngo (uche nile Pinterest hụrụ na ụmụ okorobịa na ngwaọrụ,) mgbe nke a bụ a fun oru ngo maka ị. Na ole na ole ihe na ụfọdụ imekọ ihe ọnụ, ị nwere ike mfe iru oyi ihu igwe echebe ma ọ bụ na nkịta ulo ka kpafuo ụmụ anụmanụ na obodo gị. Nke a bụkwa a oké ule maka mmekọrịta, dị nnọọ ka Ikea ịzụrụ. Ọ bụrụ na ị ma n'anya art, ike ụfọdụ mkpụrụ ọnụ ma na-inye ha anụmanụ nonprofit ka okushon anya ma ọ bụ na-eji mata.
6.) Kọmputa: Ọ bụrụ na ị tech-savvy, na-enye aka-anapụtakwa ma ọ bụ echebe ha webpage imewe ma ọ bụ ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị. Ọ bụrụ na ị Blog, dee ụfọdụ isiokwu banyere ihe ndị a na obodo ego, ma ọ bụ na-enyere ha na-etolite blọọgụ nke ha onwe ha.
7.) Akpakọrịta: M na-arụ ọrụ na ara n'ụlọ ke Kentucky, na m nwere ike obi sie gị na ọtụtụ ndị bi na adịghị na-ọtụtụ ndị ọbịa. Ọ bụrụ na ị nwere a Pita nwere nri àgwà a akara nke na-arụ ọrụ, ịgwa anụmanụ ọgwụ otu na-amalite usoro nke na-gị Pita njikere maka ọrụ afọ ofufo. Anyị niile maara otú na-akasi obi anụmanụ na mmekọrịta bụ, Ya mere, gịnị na-enye na onye nọ ná mkpa nke nkasi obi? Tụlee àjà ọrụ ndị a na-anụ ụlọ ime ihe ike echebe, Ezi na ụmụaka, na hospice ọrịa, kwa. Ị na-eche naanị nwamba na nkịta nwere ike ime nke a na-arụ ọrụ, ma! Ahụwo m bunnies, pigs, na ọbụna turtles niile na-eme ha!
8.) Egwuregwu: Ọ bụrụ na gị n'obi n'anya na-anọ n'ọrụ, tụlee ahazi na ikere òkè na a 5K agbasara oha na eze ụmụ anụmanụ obi ọjọọ, ma ọ bụ na-enye na-eje ije dị ka nkịta na a local doo omume. Ikekwe ọbụna nọrọ n'ụlọ a nwa nkita "agbụrụ" ma ọ bụ nwa pusi Superbowl na-erite uru na mpaghara gị Humane Society. Ị ga-enyere charities ná mgbalị ha na mgbe na-enwe fun, na nke ahụ bụ a mmeri-mmeri.
9.) Ịnọgide na: Anyị anụmanụ echebe jupụtara nkịta na nwamba na mkpa ruo mgbe ebighị ebi obibi, na nnapụta dị iche iche mkpa na-akpata n'ihi na ụmụ anụmanụ ndị a iji gbochie euthanasia. Ọ bụrụ na ị na-na na a homebody na nwere mmezi ohere azụlite anụmanụ nwa oge, kpọtụrụ gị obodo anụmanụ echebe na nnapụta iche iche. Gịnị bụ mma karịa na-azọpụta a ndụ na na-na-egwu na ọhụrụ furry enyi?
Enwe ndị philanthropic ntụrụndụ dị ka di na nwunye, ma mara na ọnụ gị na-eme ka a dị ndụ nke ụmụ anụmanụ na gburugburu gị.